हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य(फागुन २९ गते मंगलबारको राशिफल)::Leading Nepal News
हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य(फागुन २९ गते मंगलबारको राशिफल)
आज वि.सं. २०७४ साल फागुन २९ गते मंगलबार, तदनुसार ई.सं. २०१८ मार्च १३ तारिख
व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ ।जग्गाजमिनको कारोबार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ ।पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ ।
सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । अतिथिका रूपमा सम्मान पाइनेछ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । विगतको श्रमबाट राम्रै लाभ हुनेछ ।
सवारी साधन हाँक्दा सचेत रहनुहोला । कडा मिहिनेत र लगशीलतापछि गरिएको कामबाट लाभ हुने सम्भावना छ । दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । सङ्कटको सामना गर्दै उपलब्धी हासिल गर्नु पर्नेछ ।
आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति हुनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । धार्मिक वा सामाजिक काममा सहभागी भइने छ ।
स्वास्थ्य सबल रहने छ ।आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् । तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धामा पकड भएको राम्रो दिन छ । अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ ।
आज मन भावना, खेलवाड र कल्पनामा अल्मलिन सक्छ, सचेत रहनुहोला ।आत्मबलमा कमी आउने छ, निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।तर बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुने समय छ ।
आज ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ ।घरायसी कामधन्दाका लागि खट्नु पर्ने छ । रोमान्स र प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, य)
व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ ।परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् ।नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । नयाँ कारोबार वा साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय छ । साथीभाइले आवश्यक सहयोग गर्नेछन् ।
आज विवाद र झगडामा पछि हट्नु राम्रो हुनेछ । विलासिताका क्षेत्रमा धन खर्चको होला । कामको दायित्व क्रमशः बढ्दै जानेछ ।गरिआएका काममा फाइदा नै हुनेछ । छरछिमेकी वा इष्टमित्रको जिम्मेबारी वहन गर्नु पर्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्नु उति समय छैन ।
आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ । आजको दिन रमाइलोमा बित्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ ।व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद रहने छ ।
आज परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुनेछ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । जिम्मेबारी वहन गर्नु पर्नेछ, उत्साहपूर्वक काम गर्नुहोला । धनसङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुनेछैन ।
पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ ।ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । आत्मबल बढ्ने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् ।